Sep302020 by साहारा संदेशNo Comments
१३ वर्षीय बालकबाट १५ वर्षीया किशोरीले बच्चा जन्माएपछी भयो यस्तो
नेपाल, मनोरञ्जन, समाचार, सोसल मिडिया
एजेन्सी: इग्ल्यान्डमा एक १३ वर्षका बालक १५ वर्षीया किशोरीको प्रेममा परे । दुवैबाट बच्चाको जन्म भएको छ । ब्रिटेनमा सबैभन्दा कम उमेरमा बाबु बनेका ती व्यक्तिको नाम एल्फी हो । उनको प्रेमिकाको नाम सेन्टल हो । यो खबर ब्रिटेनमा भाइरल भइरहेको छ । १३ वर्षको उमेरमा सेन्टलको बच्चाको पिता बनेका एल्फीले २ वर्षपछि डिएनए जाँच गराएका थिए । जाँच गराएको रिर्पोट आएपछि सबैजनाको होस उडेको थियो । वास्तवमा सेन्टलले आफ्नै कोखबाट जुन बच्चाको जन्म दिएकी थिइन् त्यो बच्चा एल्फीको नभएर अरु कसैको थियो । एक मिडिया रिर्पोट अनुसार एल्फी सेन्टलको बच्चाको असली पिता होइनन् । बच्चाको वास्तविक पिता अरु नै हुन् । तर हालसम्म उनको बच्चाको वास्तविक पिता को हुन् त्यसको बारेमा जानकारी आएको छैन् । एल्फी हाल २२ वर्ष पुग्न लागेका छन्, उनले सेन्टल र बच्चालाई छाडिदिएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर एल्फीले सेन्टलसँग सम्बन्ध ...
एउटा बाख्राले गर्‍यो यस्तो चमत्कार, स्थानियको होस उड्यो
नेपाल, मनोरञ्जन, सोसल मिडिया
काठमाडौं: आज सम्म तपाईँले एक बाख्राले कतिसम्म पाठा–पाठी जन्माएको देख्नु वा सुन्नु भएको छ ? सामान्यतयाः एक, दुई, तीनसम्म हामीले देखेका वा सुनेका छौँ । तर एक बाख्राले ५ वटा पाठा जन्मायो भन्दा तपाँईलाईँ विश्वास लाग्छ ? हो यो सत्य घटना हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा यस्तो कुरा बाहिर आएको छ । यहाँ गुर्भाकोट नगरपालिका–९ भालुखोलामा एक बाख्राले ५ वटा पाठा जन्माएको हो । गुर्भाकोट नगरपालिका–९ मा युवराज वलीको घरको बाख्रीले ५ वटा पाठा जन्माएको हो । स्थानीय युवा समाजसेवी वीरेन्द्र वलीका अनुसार उक्त बाख्राले यो भन्दा अगाडीसम्म दुई वटा मात्र पाठा दिने गर्थ्यो तर यसपटक भने ५ वटा पाठा जन्मायो । यो नगरपालिकामा हाल सम्मकै नौलो कुरा हो । बाख्रा उन्नतजातको रहेको पनि वलीले जानकारी दिए । त्यसैगरी ११ प्रतिशत मानिसहरुमा बाइपोलार डिसअर्डर हुने र ६ प्रतिशत डिप्रेशन र एक्लोपनाको शिकार हुने...
Sep252020 by साहारा संदेशNo Comments
धुलिखेलमा भेटियो ३५ सय वर्ष पुरानो यस्तो वस्तु: हेर्न आउनेको भीड
नेपाल, मनोरञ्जन, समाचार
काठमाडौँ: काभ्रेको धुलिखेलमा ३८ सय वर्ष पुरानो किराँत देवीको प्रतिमा फेला परेको छ । धुलिखेल नगरपालिका ३ स्थित अरनिको राजमार्गको जमिनको सतहभन्दा करिब तीन सय मिटर तल मूर्ति फेला परेको हो। पुरातत्वविदहरूले किराँत देवीको मुर्ति फेला पारेपछि मूर्ति नेपालको एक सबैभन्दा प्राचीन प्रतिमा रहेको बताएका छन्। उनीहरुले उक्त प्रतिमा ३८ सय वर्ष पुरानो रहेको जनाएका छन्। मुर्ति शुक्रबार एक निर्माण कार्यको क्रममा फेला परेको हो। देवीको प्राचिन प्रतिमा फेला परेपछि हेर्न आउने स्थानीयको भिड लागेको थियो। पुरातत्वविदहरुका अनुसार उक्त मूर्ति पहिलो वा दोस्रो ईसाइ पुर्व कालको हुनु पर्ने बताएका छन्। मुर्तिमा गरगहनाको राम्रोसँग शिल्प गरिएको छ भने प्रतिमाको दाँया हात नभएको तस्बिरमा देख्न सकिन्छ। गोर्खाली खबरबाट...
Sep102020 by साहारा संदेशNo Comments
लकडाउनमा तरकारी लिन गएको छोरोले केटि लिएर भागेपछि भयो यस्तो
मनोरञ्जन, समाचार, सोसल मिडिया
एजेन्सी लकडाउनका समयमा तरकारी किन्न गएका युवकले बेहुली लिएर फर्किए भन्ने सुन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।वास्तविकता यस्तै छ । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गाजियाबाद एक युवक पसलमा साामान लिन गएका थिए । तर उनी जब घर फर्किए तब साथमा दुलही लिएर फर्किए । समाचार माध्यमहरुमा जनाईए अनुसार, उनी घरमा तरकारी लिन भन्दै पसल गएका थिए तर फर्किदा बेहुली लिएर फर्किएपछि आफन्त सबै अचम्ममा परे । एकाएक छोराले बुहारी लिएर आएको देखेपछि परिवार आक्रोशित बने र यो घटना पुलिस ठाना सम्म पुग्यो । उक्त युवती युवककी प्रेमिका थिईन् । उनीहरुले एक महिना अगाडि मन्दिरमा विवाह गरेको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको छ । छोराले आफूलाई जानकारी नै नगराई यस्तो हर्कत गरेको भन्दै आमाले छोरा बुहारीलाई नै घरमा पस्न नदिएकी हुन् । ...
Jul312020 by साहारा संदेशNo Comments
काठमाडौ । सायद अहिले कलाकार दिपक रागी र दिपा श्री निरौला लाई नचिन्ने कोहि हुनुन्न होला । साथै केही समय पहिला दिपा श्री निरौला सामाजिक संजाल मा पनि बिबाद मा आएकी थिइन । उनी बिबाद मा आउने रसस्य माहानायक राजेस हमाल होईन । भन्ने उनको भनाई थियो र बिबाद मा आएकी थिईन । उनी पहिला हास्य टेलिसिरियल तितो सत्य मा धेरै खेलिन । नेपाली चलचित्रमा लगातार सफल चलचित्र बनाएर रेकर्ड कायम गरेका छक्का पञ्जा टिमले नयाँ चलचित्र निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । हास्यकलाकार तथा अभिनेता दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ४’ ल्याउने भएका छन् । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ का तीनवटै सिरिज दर्शकले निकै रुचाएका थिए । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ४’ यस वर्षको दशैंमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर कोरोनाभाइरसका कारण यसको छायांकन समेत हुन सकेन । अब भने चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ४’ पहिलेको भन्दा फरक कथामा ...
Jul272020 by साहारा संदेशNo Comments
पोखरा । डिजिटल स्टार प्रालीको प्रस्तुति शिव अखेली को शब्द गोबिन्द पौडेल को लय रिना केसि को स्वर तथा तारानाथ आचार्य को एरेन्ज अनि निर्देशन रहेको तीज गीत "बाटैमा भाइरस" अहिले उत्कृष्ट मौलिक तीज गीत बन्नु का साथै टिकटकमा भाइरल भएको छ । लाखौले टिकटक बनाएका छन भने गीत ले सबै दर्शक श्रोताको मन जितेको छ । ती उत्कृष्ट टिकटक मध्री यह केही प्रस्तुत गरिएको छ हेर्नुहोला र तपाईं पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । अहिले को माहोल अनुसार देश (कोभिड 19) कोरोना भाईरस को माहामारी फैलिएको बेला यहि समय सेम देश मा भएको समय शीत मिल्न गएको कारण सामाजिक संजाल मा पनि यो बाटैमा भाईरस भन्ने गित एकाएक चर्चामा आएको हो । यो गित सबैले रुचाईएको छ भने लाखै दर्सक को मन मा पनि अहिले एहि गित बसेको छ । धेरै फेसबुक र टिकटक भाईरल भएको यो बाटैमा भाईरस तिजको गित को भिडियो हेर्न तल किल्क गर्नुहोला । https://www.youtube.com/watc...
बिल्कुलै नया सबैको मन छुने मौलिक तीज गीत “बर्खे झरीलाई” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
पोखरा: अहिले यो तिजको माहल सङै तिजका गित बजार मा आएका छन । यस्तै अहिले डिजिटल स्टार प्रालीको प्रस्तुती मा मौलिक तीज गीत “बर्खे झरीलाई” सार्बजनिक भएको छ, अहिलेको बिध्यमान समस्या ले माइत जान नपाएकी चेलीको गुनासो समेटेर तयार पारिएको यस गीत मा जुना श्रीश र सृजना कुँवरले स्वर दिएका छन् । रेशम निर्दोषको लय शब्द सिर्जनामा तयार भएको यस गीतको एरेन्ज तारानाथ आचार्य ले गरेका हुन् भने पोखरा स्स्थित डिजिटल स्टार रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको हो ।यस गीतलाई गणेश सापकोटाले छायांकन गरेका छन् भने बिनु कार्की, मनोज सापकोटा, बुद्धी खनाल, माया गिरी को अभिनय रहेको यस गीतको सम्पादन सुबाश अमगाई ले गरेका छन् भने निर्देशन तारानाथ आचार्यले गरेका छन् । आउनुहोस हामी पनि हेरौ गीत कस्तो बनेको छ । भिडियो हेर्नका लागी तलको लिंक क्लिक गर्नुहोला । भिडियो हेरिसकेपछी कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दि...
Jul242020 by साहारा संदेशNo Comments
झुटो होईन १ पटक हेर्नुहोस पेट नै दुख्ने गरि हाँस्नुहोस भिडियो सहित
मनोरञ्जन । आज हामिले निकै नै कमेडी खालको एक भिडियो देखाउन गएका छौ । तँपाईहरु त्यो भिडियो हेरेर अति होईन एकदुम संगले हाँस्नुहुने छ । हल्का रमाईलो को लागि मात्रै हो । हेर्नुहोस हाँस्नुहोस र अरुलाई पनि हँसाउनुहोस । आज हल्का मुड फ्रेस गर्नुहोस । रमाईलो छ भिडियो अनि त्यो कमेडी भिडियो हेरी पेट मिचिमिची हाँसेर मात्रै भएन नि त्यो हेरेर अरुलाई पनि हँसाउनुहोस । अरुलाई हँसाउन को लागि तल देखाईएको सेयर बटम मा छोएर आँफ्नो फेसबुक वाल मा पनि सेयर गर्न पर्नी हुन्छ बल्ल हरुले हरु अरुलाई पनि हँसाउन सक्नुहुन्छ । अनि यो मनोरञ्जन लिएर हजुलाई कस्तो लाग्छ ? कति हाँस्नुभयो कि हाँसो लागेन त्यो पनि हामिलाई भन्नुपर्ने हुन्छ तेसैले तल गएर आ-आफ्नो कमेन्ट बक्स मा छुच्चो नमानी कमेन्ट पनि दिनुहोला । फेरि भिडियो हेर्नी कमेन्ट चै बिर्सनी होला । त्यो बिर्सन भएन है लौ भिडियो हेर्न तल किल्क गर्नुहोला भिडियो मज्जाले चल...